सिन्धुपाल्चोक कांग्रेस आउँदो चुनावमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन्छ पासाड नोवु शेर्पा, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस - Yugantar Khabar | News Portal
काठमाडौं | नेपाली काँग्रेसका सक्रिय युवा नेता तथा नेपाली कांग्रेस तरुण विभागको केन्द्रीय सदस्या एवं विदेश सम्वनय संयोजक समेत रहेका छन् । सामान्य किसान परिवारमा हुर्केबढेका उनी मिलनसार, सहनसील र केटाकेटी, युवा र बुढाबुढी सबैसंग मिल्न सक्ने स्वभावका उनी आफुले आँटेको र जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने गरेको सुनाए । सुरुदेखि नै माओवादी जनयुद्ध हुंदै नेपाली काँग्रेससंग प्रभावित भई साधारण सदस्यबाट राजनीति सुरु गरेका उनले लोकतन्त्रमा विस्वास राखी निरन्तर देश, जनता र पार्टीको सेवा गर्दै आएका छन् । जिल्लाको तत्कालिन स्थानीय नेताहरुको प्रभाव र विपी, कृष्ण प्रसाद भटराई, गणेशमान सिंह लगाायतलाई पनि बुभ्m्ने अवसर पाएं । भुगोल तथा संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् । व्यापार र सामाजिक सेवाको अलावा हाल पुरै राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन् । अध्ययनका क्रममा माओवादी जनयुद्धमा विस्थापित समेत हुनु पर्यो । साथै राजनीति तथा समाजसेवामा आफु भनेर आउनेलाई हमेसा सहयोग गर्दै आएको छु हामीसंग कुरा गर्दै भने । उनी पार्टीको एक इमान्दार सिपाही हुन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपाली जनताले दुई तिहाई मत दिएर कम्युनिष्टहरुलाई सत्तामा पुर्याए तर देश र जनताको लागि केही गर्न सकेनन् । अब उहाँहरुले कसैलाई दोष दिने अवस्था छैन । दोषको भागीदार उहाँहरु आफै हुनुहन्छ ।
तपाईका परिचय ?
मेरो नाम पासाड नोर्वु शेर्पा हो । मेरो जन्म २०४२ वैशाख ४ गतेका दिन बुबा दावा ग्याल्जेन तामाड र आमा छाएसाड तामाडको कोखबाट भोटेकोसी ५ सिन्धुपाल्चोकमा भएको हो । म सामाजिक, व्यापारिक र राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुंदै आएको छ ।
तपाईको स्वभाव तथा पारिवारिक आर्थिक सामाजिक अवस्था ?
सहनशील मिलनसार र केटाकेटीदेखि युवा र बुढाबुढीसम्म सबैसंग मिल्ने स्वभाव रहेको थियो, छ । पारिवारिक आर्थिक सामाजिक अवस्थाको कुरा गर्दा मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा हुर्केबढेको हुं । अत्यन्त विकट गाउँ ठाउँमा मेरो जन्म भयो । वर्ष दिन खान गाह्रो थियो । यसले गर्दा पढाई लेखाईमा समस्या भयो । अर्को माओवादी जनयुद्धले पनि निकै प्रभावित हुन पुग्यो । धेरै विस्थापित भए भने बाध्यताले माओवादीमा लाग्न बाध्य भएं । म आफै पनि त्यहाँको अवस्थाले तत्कालिन माओवादीमा लाग्न बाध्य भएं ।
तपाई जन्मे हुर्केको गाउँ ठाउँको अवस्था ?
नेपाल यसै पनि भौगोलिक रुपमा विविधता रहेको छ । सिन्धुपाल्चोक राजधानीबाट नजिकै छ तर विकासको हिसावले हाम्रो क्षेत्र पछाडि छ । अर्को कमजोर डाँडापाखा र खेतीयोग्य जमिन कम हुनु र शिक्षाको कमि हुनु आदिले गर्दा म जन्मे हुर्केको ठाउँ विकट रहेको छ । अहिले केही हदसम्म उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । हामीले शिक्षा तथा विकास निर्माणमा निकै काम गरिरहेका छौं ।
सामाजिक राजनीतिक यात्रामा कहिलेदेखि सक्रिय हुनुभयो ?
म जन्मेको जिल्ला अथवा मेरो गाउँ ठाउँ तत्कालिन माओवादीको जगजगी थियो । त्यसरी बाध्य भएर २०५८ सालदेखि माओवादीमा लागियो । मेरो दाई त विस्थापित नै हुनुभयो । मलाई सेनाले यातना दियो, हिरासतमा राख्यो । हाम्रो घर समेत भत्काईदियो । त्यसरी म माओवादीमा सक्रिय हुंदै माओवादी सेनाको क्यान्टिनमा लामो समय बसें । राजनीतिक रुपमा धेरै कुराहरु पनि सिकियो । जब माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आए उनीहरुको रवैया राम्रो लागेन । अझ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए उनले हिजो के गर्छु भनेका थिए र के गरे हामी सबैले देख्यौ । त्यसरी त्यस पार्टीमा बस्न मन लागेन । विचार, सिद्धान्त अनुसार चलेनन्, कार्यशैली पनि मन परेन । त्यसपछि म त राजनीतिक नसा लागिसकेको मान्छे । राजनीति भन्दा टाढा बस्ने कुरा पनि आएन । त्यसरी ०६४ मा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको हुं ।
माओवादी जनयुद्धमा लागिरहंदा केका लागि लडेको भन्थे ?
उनी युग परिवर्तन गर्न लडेको भन्थे । जातपात केही होईन भन्थे । विभेद हटाउने र विकास निर्माणको धेरै कुरा हुन्थ्यो । म आफै पनि भौगोलिक हिसावले कमजोर ठाउँमा हुर्के बढेको मान्छे । जुन एजेन्डाले मलाई पनि तात्यो र आसा पनि लागेको थियो । तर जनयुद्धमा जसरि लागिएको थियो, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ति एजेण्डाहरु बिर्से । तर नेपालमा युग नै परिवर्तन नभएको चांही होईन । राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था आयो । यसलाई एउटा युग परिवर्तनको रुपमा लिनै पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसमा आउने प्रेरणा कहाँबाट पाउनु भयो ?
बाध्यतामा माओवादीमा लागेको मान्छे । विचार सिद्धान्त सबैका राम्रा हुन्छन् । माओवादीको राम्रो थियो । तर पात्र र क्रियाकलाप राम्रा भएनन् । त्यसरी मलाई माओवादी पार्टी मन परेन । आखिर भयो पनि त्यस्तै । त्यहि कारणले आज कमजोर अवस्थमा पुगिरहेको छ । भोटेकोसी गाउँपालिका यसै पनि माओवादी जगजगी थियो छ । अहिले पनि हाम्रो पोल्टाबाट अन्त नजाओस भन्ने छ । तर हामी मिहेनत गरिरहेका छौं । कांग्रेसको विचार सिद्धान्त बाँढ्ने र विकास निर्माणका कामहरु गरिरहेका छौं । अमृत बुढाथोकी (तरुण दल), राजकुमार थापा (भोटेकोसी ६ का अध्यक्ष) र यता केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्रीहरु मोहनबहादुर बस्नेत, शंकर भण्डारी लगायतको प्रेरणा र आग्रहमा कांग्रेस प्रवेश गरेको हुं । पछि त कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुलाई बुझ्ने अवसर पाएं, कितावहरु पढें झन प्रभावित भएं । त्यसरी पार्टीमा तन मन धन सहित लागिरहेको छु ।
तपाई कुन गुठको नेता ? कांग्रेस त गुठ नै गुठमा अडेको छ नि ?
गुठ त नेपाली कांग्रेसमा मात्र होईन सबै पार्टीमा रहेको छ । कम्युनिष्टमा झन बढी छ, टुक्रा टुक्रामा विभक्त छन् । म नेपाली कांग्रेसको एक सञ्चा सिपाही तथा कार्यकर्ता हुं । मेरो गुठ छैन ।
सिन्धुपाल्चोकमा वामपन्थीहरुबाट सभामुखदेखि मन्त्री बनेका छन् विकास निर्माणमा काम के के भएका छन् ?
तपाई राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ । जिल्लाले सभामुखदेखि मन्त्रीसम्म पाउनु गौरव र राम्रो कुरा हो पार्टी फरक भएपनि । तर काम के के भए भन्दाखेरी सिन्को भाँचिएको छैन । आज सिन्धुपाल्चोकमा जति विकास भईरहेका छन् त्यो कांग्रेस नेतृत्वले गरेका काम गरेको छ । हाम्रो पार्टीका नेता पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले धेरै विकास निर्माणको काम गर्नु भएको छ । कति कामहरु प्रक्रियामा रहेका छन् । कम्युनिष्टका नेताहरु पटकपटक सरकारमा गएको भएपनि सम्झन लायक कामहरु खासै भएका छैनन् ।
काम तपाई गर्ने, चुनाव अर्को पार्टीले जित्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ र ?
वास्तवमा त्यही भईरहेको छ । ठुलठुला विकास निर्माणको काम कांग्रेस नेतृत्वले गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोकलाई बनाउने पुरै रोडम्याप हाम्रै हो । अर्को सिन्धुपाल्चोकमा दैवी प्रकोप लगायत रोगभोकमा समेत हामीले जनताको हितमा काम गर्दै आएका छौं । सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न बाढी पहिरोमा राहत वितरण निरन्तर गर्दै आएका छौं । कोरोनामा हामीले स्वास्थ्य सामग्री बाढ्नेदेखि लिएर जनताको सुख दुख र हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय हुंदैं आएका छौं । बरु कम्युनिष्ट नेताहरुले हामीले बांडेको सामग्री नबाड्न दबाब दिईयो । विभिन्न पहिरोमा अस्पतालमा उपचार गरिएको खर्च सात लाखसम्म मैले तिरेको छु तर राज्यले तिरेन । त्यहांको कम्युनिष्ट नेताहरु हेलिकप्टर चढेर जानु हुन्छ तर राहत पनि छैन र राहतको घोषणा समेत गर्न सक्नु भएन गर्नुभएन । बाढी पहिरो तथा कोरोनामा परेर टुहुरा भएकाहरुलाई पढाईलेखाई गराउनुको साथै जीवनयापन र लालनपोषण समेत गर्दै आएका छौं । हो हामीले चुनावमा हारेका छौं, जनताले जिताएका पनि छन् । आखिर ५ वर्षमा अर्को चुनाव भईहाल्छ नि । चुनाव हार्नु भनेको सुध्रने मौका पनि हो । पार्टीलाई बलियो बनाउने गरी संगठन गरिरहेका छौं ।
अब त जित्नु होला नि कम्युनिष्टहरु फुटेका छन् आफु सुध्रने अनि चुनाव जित्ने होईन क्यारे ?
उहाँहरु फुट्नु र नफुट्नुको हामीलाई मतलव भएन । उहाँहरु मिले जुटे भईहाल्यो नि । हामीले फुटाएका पनि होईनौ । देशमा रहेका दलहरु फ्ट्नु राम्रो होईन भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । उहाँहरु आफ्नै कारणले जुट्ने फुट्ने काम गर्नु भएको हो । संसद विघटन गर्नुभयो उहाँहरुकै घर झगडाको कारणले । हामी त सवल सरल प्रतिपक्षकाो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । उहाँहरुको कुनै सैद्धान्तिक र विचारको झगडा थिएन । मात्र पद, पैसा र अवसरको झगडा हो । उहाँहरुको रवैया त जनताले हेरिरहेका छन् । हाम्रो कारणले होईन आफ्नै कारणले उहाँहरु कमजोर हुनुभएको हो । त्यसैले हामीले कुनै पार्टि फुटे जित्ने नफुटे हार्ने अवस्था छैन र त्यस्तो हुने पनि छैन । हाम्रो आफ्नै विचार सिद्धान्त र बलवुत्ताले जित्छौं ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टीको अवस्था के छ ?
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण विवाद टुंगिएको छ । जिल्लामा पार्टीका नेताहरुबीच एकता हुन नसक्दा त्यस्तो अवस्था देखा परेको हो । एकाध चुनावहरुमा पराजित भएपनि हामी कमजोर छैनौ । अहिले हामीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुको साथै संगठन मजबुत बनाउने अभियानमा छौं ।
मेरो चाहना महाधिवेशन प्रतिनिधि हो । पार्टी भित्र छलफल भईरहेको छ र हुन्छ । अर्को यसमा जिल्ला पार्टीले मेरो आवश्यकता ठान्छकि ठान्दैन त्यसमा भर पर्दछ । अग्रज नेता, कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरुले जे भन्नु हुन्छ म त्यही गर्छु । अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सिन्धुपाल्चोक पार्टीले चुनावमा किन हा¥यो ?
चुनाव हार्नुको मुख्यतः तिन वटा कारण रहेका छन् । पहिलो वाम गठबन्धन, टिकट वितरण विवाद रहित हुन नसक्नु, अर्का काँग्रेसको एउटा रोग सबैलाई थाहा छकि पार्टीभित्रकै अन्तरघात । टिकट वितरणमा एकरुपता नहुंदा स्थानिय तह चुनावमा केही कमजोर भएका छौं । प्रदेश अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र २ ख मा हामीले जितेको अवस्था छ । आगामी दिनमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन्छौ ।
हाल राजनीति कसरी अघि बढिरहेको देख्नु भएको छ ?
खासमा नेपाली राजनीति पुरै फोहोरी खेलमा दुबेको छ । कम्युनिष्टहरुले देशलाई वर्वाद बनाईरहेका छन् । अझ संसद विघटन गरेर देशलाई अनिर्णयको भूमरिमा फसाउदै थिए तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जोगाईदियो । सर्वहाराको कुरा गरेर जनतालाई गरिब बनाईरहेका छन् । उनीहरुले राजनीतिलाई पद र पैसा कमाउने मेलो मात्र बनाएका छन् यसको सबै देशभक्तहरुले भण्डाफोर गर्न जरुरी भईसकेको छ । वास्तवमा पुरानो राजनीतिलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको राजनीति केही पनि होईन रहेछ । विपीले जस्तो संघर्ष अहिले नेता वा तपाई हामीले गर्न सक्दैनौ । तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिंकतै विचलित नभई जिवन पर्यान्त संघर्ष गर्नुभयो । उनैले जन्माएको पार्टी देशको ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी बनेको छ । त्यस्तो गौरवशाली पार्टीको सिपाही हुन पाउंदा गर्व महसुस हुन्छ । यद्यपी पार्टीले धेरै कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै, अहिलेको राजनीति शुद्धिकरण आवश्यक छ । सबै र सबैलाई अट्ने काँग्रेस बनाउन आवश्यक छ । यसमा नेतृत्वको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
काँग्रेस झन किन यति धेरै कमजोर भयो ?
नेपाली काँग्रेसले आफु हारेर पनि संधैं देशलाई जिताउंदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस जन्मेदेखि आजसम्म के कति संघर्ष ग¥यो तपाई हामी सबैले देखे, सुने बुझेकै छौं । २००७ देखि पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर दुईवटा जनआन्दोलन हुंदै आज देशमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यो काग्रेसको कारणले मात्र सम्भव भएको हो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायौं । काँग्रेसले देश र जनताका लागि निरन्तर संघर्ष ग¥यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा हार्दैछौं भन्ने थाहा हुंदाहुदै पनि देशले निकास पाउनुपर्छ भन्ने हेतु सहित गिरिजाप्रसाद कोइरलाले चुनाव गराउनुभयो । यस पटकको चुनावमा पनि हामीले त्यसै ग¥यांै । बल्लतल्ल आएको संविधानलाई कार्यान्वयन र संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । आज वाम गठबन्धनले दुनियाँ कुरा गरेर संसदमा दुईतिहाई त ल्याए तर देश र जनताका लागि के गरे त ? संविधान कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? विभिन्न काण्डहरु कहाँ पुग्यो ? सुशासनमा सरकार कहाँ छ ? तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । एत्रो कोरोना रोग चलिरहँदा जनताले राहत पाउने भन्दा पनि स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारमा गरे । त्यसैले हामी कमजोर छैनौ, चुनावमा हारजित त भईरहन्छ ।
तर कांग्रेसलाई पनि आन्तरिक द्धन्द्धले कहिल्यै छाडेन ?
काँग्रेसभित्रको गुठउपगुठको कुरा उठाउन खोज्नु भएको होला । नेपाली काँग्रेस एक मात्र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । यस पार्टीमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रता सबैमा छ, त्यसैले लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यौं । तर हामी नै अराजक बन्यौ भने यसको फाईदा अरुले लिन्छन् लिईरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा जस्तो बोल्नमा बन्देज छैन, हुंदैन । ठुलो पार्टी छ, मनमुटाव हुन्छन्, गुठहरु हुन्छन् । प्रजातन्त्रको सुन्दरता पनि त्यहि हो । आखिर अधिवेशनमा प्यानल हुन्छन्, एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ । हार्नेले आफ्नो पोजिसन देखाईरहनु ठिकै हालो तर पार्टीलाई घाटा हुने गरी नेताहरु चलिरहंदा आम कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, जनता दुखी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आम नेता कार्यकर्ता सच्चिन जरुरी छ । यसमा सवालमा तपाईको प्रश्न ठिकै छ ।
सरकारको निरन्तर विरोध मात्र गरिरहेको छनि कांग्रेसले ?
विरोधको नाउँमा विरोध गरिरहेका छैनौ । सडक सरकार उहाँहरुकै हातमा रहेको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण आए तर कारवाही भएन । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पनि विभिन्न प्रकरणमा सहभागी भएको कुरा आईरहंदा दुईतिहाईको सरकार छ, छानविन गरे भईहाल्यो नि त । उक्त कुरा हाम्रा नेताहरुले पनि भन्दै आउनु भएको छ । तर उहाँहरु काण्डै काण्डमा अल्मलिरहनु भएको छ । दुई तिहाईको सरकार छ, जनताको पक्षमा धमाधम काम गरेको भए हुने नि तर त्यसो गरेनन् पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्द्धमा फसिरहनु भयो । उहाँहरुलेझै हामीले संसद अवरोध गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने काम त गरेका छैनौ । यस्तो सजिलो प्रतिपक्ष विश्वमा कहि पनि पाईदैन । राम्रा कामको समर्थन, गलत कामको संसदमा आवाज उठाउने काम त गरेका छौं । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा वाम सरकारको काम राम्रो छैन । त्यसैले हामी निरन्तर संगठन सुदृढिकरणमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं ।
नेपाली कांग्रेसले पनि अवसर पाउँदा देशका लागि केही गरेन नि ?
ल हामीले गल्ती गरेकै कारणले हामी भोट पाएनौ, कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाई पाए । के कांग्रेसले जति पनि काम गर्न सकेन । हामीलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । उहाँहरुको पार्टी भित्रकै आन्तरिक द्धन्द्धले केही गर्न सक्नु भएन जुन कुरा उहाँहरुले नै भन्दै आउनु भएको छ । यो देशमा नेपाली काँग्रेस बिना कुनैपनि आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको छैन । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन समेत नेपाली काँग्रेस नै चाहियो । अहिले कम्युनिष्टले भने जस्तो समृद्धि पनि काँग्रेसबाट मात्र सम्भव छ । उनीहरुलाई संसदीय व्यवस्थामा हाम्रै पार्टीले ल्याएको हो । समाजवाद, बहुलवाद र आर्थिक उदारवादको निती समेत हाम्रै हो । त्यसैले यो देशमा नेपाली काँग्रेस ठुलो योगदान र संघर्ष गरेको छ । आज गाउँ गाउँमा सडक पुर्वाधार पुगेका छन् । विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, वित्तिय संस्था आदिमा जुन प्रगति भएका छन्, ति सबै नेपाली काँग्रेसकै उदारीकरणको नितीले भएको हो ।
बताससँगको ठेक्का सम्झौता तोडिने, नयाँ ठेक्का नलगाइने
संसद्को अवरोधले बजेट अध्यादेश रोकियो
रासायनिक मल हाहाकार ,सरकारका सबै गोदाम तथा बिक्री केन्द्रहरू रित्ता
ओलीले उद्घाटन गरेका बाँकी कामलाई तत्काल पुरा गर्न देउवाको निर्देशन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिन सुझाव